Mogadishu Journal » HORDHAC: Tottenham vs Liverpool – Safafka Macquulka Ah
Mjournal :-Labada kooxood ee Tottenham iyo Liverpool waxa ay qarka u saarnaayeen inay ku haraan wareega group-yada laakiin wadajirkooda koox ahaaneed iyo falsafada macalimiintooda ayaa keentay in labada kooxood ee Ingariiska ah inay isku wajahaan finalka Champions League.
Midkoona Jurgen Klopp ama Mauricio Pochettino koob lama uusan qaadin koox Ingariis ah laakiin waxa ay fursad u heystaan inay ku guuleystaan koobka ugu qiimaha badan kooxaha Yurub.
Tababare Mauricio Pochettino ayaa heysta koox taam ah oo ka soo xusho shaxdiisa laakiin waxaa shaki ku jiraa taam ahaanshaha weeraryahankiisa Harry Kane kaasoo ka soo kabsaday dhaawac canqowga ah, laakiin haddii Kane lagu soo bilaabo waxay u badan tahay in xiddigii u soo saaray finalka Lucas Moura inuu u dhaadhici doona kursiga keydka.
Dhanka kooxda Liverpool waxaa la xaqiijiyay oo kulankaan muhimka ah seegaya xiddiga khadka dhexe Naby Keita halka Roberto Firmino uu taam u noqday kulankaan lana filayo inuu ku soo bilowdo safka kooxda.
SHAXDA MACQUULKA AH EE LABADA KOOXOOD?